Ampiasao ny Mi Band anao hamaha Windows 10: dingana hanarahana | Androidsis
Androany, ny asan'ny We Band 4 Manohy manaitra ny mpampiasa azy ireo ry zareo, ny farany manampy ny lisitry ny lahasa amin'ny fomba ofisialy dia ny fahafaha manokatra ny solo-sainao amin'ny Windows 10 avy amin'ny Mi Band 3 sy Mi Band 4. Na dia mbola tsy misy any Eropa aza io dia any Chine ihany. , fa noho ny fitaka tsotra dia azonao atao ny manomboka mampiasa azy manomboka izao.
Ny fiarovana Windows 10 dia azo aorina amin'ny fomba samy hafa, ny iray amin'izy ireo dia mety ho pin mamoha na teny miafina, izay tsara kokoa ny manadino hahatratra ny tanjontsika, araraoty ny fehin-tànana fanatanjahan-tena Xiaomi. Amin'ny dingana izay hanazavana anao aminao, tsy maintsy manisy fanovana amin'ny solo-sainanao ianao, saingy tsy tokony hatahotra ianao, satria avelanao izy io aorian'izay nefa tsy nisy fiantraikany tamin'ilay fika.
1 Ahoana ny fomba hamohana ny Windows 10 amin'ny Mi Band 4
1.1 Kitiho ny fikirakira ny fampiharana
Ahoana ny fomba hamohana ny Windows 10 amin'ny Mi Band 4
Ny ankamaroan'ny dingana hataonao dia mifantoka amin'ny solosaina, ary mazava ho azy, tsy maintsy ho akaiky azy ianao sy ny fehin-tànana Xiaomi mihitsy. Ampifandraiso amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny Bluetooth ny findainao, avy eo ataovy toy izany koa ny We Band 4. Aza adino ny mamono ny Bluetooth an'ny finday mba hisy ny fehin-tànana.
Manaraka izany dia tsy maintsy manaraka ireto dingana hodinihinay amin'ny antsipiriany ireto ianao mba tsy hanao fahadisoana na handingana dingana iray.
Raha te-hiditra am-perinasa io lahasa voalohany io dia tsy maintsy mampiasa ny hafetsena ianao faritra fanovana. Ao amin'ny Windows 10 dia tsy maintsy miditra amin'ny Settings ianao - Faritra sy ny ora. Amin'ity fotoana ity dia tsy mila manova ny firenena ho an'i Shina fotsiny ianao, ary afaka segondra vitsy dia hampiharina ho azy ny fanovana.
Rehefa manova ny faritra ianao dia mamela ny solosainao hiditra amin'ny fivarotana fampiharana Windows ao Shina, izay hahafahanao miditra 'Ny Blaze Unlock-ko', ilay rindrambaiko novolavolain'i Xiaomi hahafahana mampifandray ny Mi Band 3 sy ny Mi Band 4 ary hamaha ny Windows 10.
Tadiavo izao amin'ny alàlan'ny motera fikarohana ary hiseho ho safidy voalohany izy. Kitiho ny get, ary aorian'ny segondra vitsy an'ny processeur, vita ny fametrahana ary apetraka tsy misy olana.
Kitiho ny fikirakira ny fampiharana
Na dia amin'ny sinoa tanteraka aza ny fampiharana dia mora be ireo dingana tokony harahinao. Mila tsindrio fotsiny ny zana-tsipìka eo ankavanana ankavanana ary rehefa tsy misy safidy intsony dia miandry segondra vitsy tadiavo ny Mi Band amin'ny alàlan'ny Bluetooth. Avy eo, amin'ny bokotra izay miseho eo akaikin'ny Mi Band, dia tsy maintsy manindry ianao ary hampifandraisina.
+ izao dia afaka manomboka ianao sokafy ny Windows 10 amin'ny Mi Band anao. Izao fotsiny dia mila apetrakao amin'ny fitsapana izany amin'ny alàlan'ny fanokafana ny solosaina, ary ny fanamarinana fa tsy maintsy hampiasa ilay fehin-tànana ianao hampiasana azy. Na eo aza izany dia afaka manohy mampiasa ny tenimiafinao na ny fomba iray nampiasanao taloha ianao.
Azonao atao izao ny mamerina ny solo-sainao amin'ny faritra tany am-boalohany ary mampifandray ny findainao amin'ilay fehin-tanana indray toy ny mahazatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Azonao atao ny mamoha Windows 10 amin'ny Xiaomi Mi Band anao
Ahoana ny fomba fampidinana horonan-tsary sy mozika avy amin'ny Youtube sy ny tambajotra sosialy amin'ny Snaptube